Darpan Nepal – दुधको चिया पिउदै हुनुहुन्छ? थाहा पाउनुहोस शरीरमा पुगेपछि कसरी विष बन्छ ?
दुधको चिया पिउदै हुनुहुन्छ? थाहा पाउनुहोस शरीरमा पुगेपछि कसरी विष बन्छ ?
Apr 16, 2018Pasang TamangHealth0Like
बरु, कालो चिया पिउनुहोस्। कालो चियाका अनगिन्ती फाइदाहरू छन्। यसले मधुमेहलाई समेत ठीक गर्छ, त्यति मात्र कहाँ हो र? मृगौलाको कार्य शक्तिमा समेत कालो चियाले धेरै राहत पुर्याउने वैज्ञानिकहरूको अनुसन्धानबाट पत्ता लागिसकेको छ।
Previous Postमहिलाहरुले यौन सम्बन्धमा यस्ता कुराहरु चाहान्छन्, जुन सुनेर अचम्म पर्नुहोला ! Next Postबौद्ध महास्तुपको पुननिर्माणमा पुरातत्व विभागको अनुमतिमा सुनको प्रयोग